Shower girazi Vagadziri & vanotengesa - China Shower girazi Fekitori
Dzinopfavisa Girazi masherufu inzira huru yekuwedzera imwe dhizaini yepamberi kune yako nzvimbo pasina kuwedzera capital.
5mm 6mm 8mm 10mm yakanyorovera girazi inotsvedza musuwo
Isu tinopa yepamusoro girazi inotsvedza masuo, Kubva pane yakasarudzwa mbishi zvigadzirwa uye kugadzira tekinoroji uye kurongedza nzira dzinogona kusangana nevatengi zvinodiwa.
Girazi rinoyangarara rese rinobva kuXinyi Girazi, rinozodzikisira zvakanyanya mwero wekuzvidzora wegirazi. Yakakwira-yepamusoro polishing inosangana nezvinodiwa nevatengi kumucheto. Iyo jeti yemvura inodimbura gomba kuti ive nechokwadi chekumira kwechinzvimbo uye kudzivirira kunamatira kwepanhi remusuwo. Girazi rakadzora rakapfuura iyo US (ANSI Z97.1, 16CFR 1201-II), Canada (INOGONA CGSB 12.1-M90) uye eEuropean standard (CE EN-12150). Chero logo inogona kuve yakagadzirirwa, uye iyo yekupakira inogona zvakare kuiswa mukati maererano nezvinodiwa nevatengi.
Mavara akakurumbira akajeka girazi, Ultra yakajeka girazi, Pinhead girazi rakatsamwa, Girazi rakajeka girazi.
6mm 8mm 10mm 12mm Yakapusa girazi Shower gonhi
Isu tinopa akakwirira akadzikama magirazi magonhi, mapati akapindirana egirazi madhoo, emukati magirazi egirazi, emukati-akajeka magirazi egirazi, madonhwe egirazi egirazi, girazi rakapfava Magonhi egirazi etc.
Yakafuta: 1/5 ″, 1/4 ″, 3/8 ″, 1/2 ″
Flat Edge, Yakapepetwa, Waterjet Cutout Hinges, Kuchera Makomba, Yakapfava NeRogo